China Diamond girazi zvedongo saha, girazi chibooreso, girazi holw saw, girazi tapper, zvedongo gomba saha, machena gomba saha fekitori uye vagadziri | Boda
Diamond girazi zvedongo saha, girazi chibooreso, girazi holw saw, girazi tapper, zvedongo gomba saha, machena gomba saha
BOSENDA girazi gomba rakaona / girazi gomba rinovhura, inonakidzwa nekuita kwekuita, musoro wekuchera uzere nemhando yepamusoro yemadhayamondi, chigadzirwa chigadzirwa chakareruka, chine musoro unopinza uye unogara kwenguva refu, uye anti-skid kupfeka nemishonga. Iine zvese hunhu hweakanaka girazi chibooreso / zvedongo chibooreso / zvedongo gomba saha.
Musoro wekuchera unogadzirwa neyemhando yepamusoro yakawedzera uye yakasimbiswa emery, iyo inogara yakasimba kupfuura zvakajairika zvakafanana maburi anovhura. Iyo yakasarudzika yekuvhura dhizaini uye nickel yakanamirwa kurapwa pamusoro pekunze inogona kudzikisira kushorwa kana kuchera uye kugadzira slotting uye kuchera kunoshanda. Iine dhizaini yakagadziridzwa yechip chip kubvisa groove, iyo chip uye slag inogona kuburitswa kubva kune chip kubvisa groove zvakanaka mushure mekuvhura, uye inogona kunyatsobvisa kupisa panguva yekushanda maitiro.
Iyo yekutenderera mubato inokodzera yemagetsi ruoko chibooreso uye vise. Izvo zvigadzirwa zvechigadzirwa zvakakwana uye zvinosangana nezvinodiwa zvekuvhurika kwakasiyana
Girazi gomba saha rakakodzera kuvhura maburi pazvinhu zvinopwanyika uye zvakaoma zvakadai semagirazi, maceramic matiles, zvidhinha zvine vitrified, ceramics, marble, nezvimwe.
Dhaimani ikakuruma negirazi gomba rekutengesa rinosanganisa tekinoroji yepamusoro, yesainzi uye tekinoroji kubudirira uye kuita. Precision yakaitwa, yakanakisa kupfeka isingagadzike, yakapinza. Mukushanda kwekuita, ine zvakanakira kusaperera kwekudonha, kumhanya uye kupinza pamwe s mushandisi-inoshamwaridzika.
Special drill: inokodzera kuchera girazi, ceramics, mataira epasi, nezvimwewo musoro wekucheka haune mhodzi uye wakagadzirwa nesemeri. Iko kune slot pane iyo yekucheka musoro madziro kufambisa kuburitsa kwemarara machipisi. Inokodzera kuchera maburi akakura ehupamhi.
Ongorora: usati washandisa, ita shuwa kuti ese screws echigadzirwa akagadziriswa. Chekutanga kuyedza nechombo chemagetsi chekuboora kuti uone kana banga racho rakagadziriswa mushe, wozovhura gomba kuti udzivise kushanda zvisizvo.
Pashure: 42 Bi-Metal Hole yakaona yehuni simbi, Akaona sei, Gypsum Board Plastic Iron Plate Hole Saw, Metal Wood chibooreso, matel chibooreso
Zvadaro: Granite mugomba saha, sintered machena mugomba saha, ibwe gomba saha, madhaimani chiwanikwa aricheke musoro, gomba saha, machena kukanda, kongiri chibooreso
42 Bi-Metal Hole yakaona yesimbi yehuni, Wakaona sei, Gy ...
Kuveza huni saha, gypsum bhodhi gomba saha, PV ...
Ndege mhando gomba saha, yekuveza huni saha, a ...
HSS mugomba saha, simbi mugomba saha, simbi mugomba saha, mhoro ...
TCT gomba saha, gomba chibooreso, simbi simbi mugomba saha, c ...
Granite mugomba saha, sintered machena mugomba saha, sto ...